हरप्रहरप्रकाशित मिति: २०७८ पौष १३, मंगलबार (३ हफ्ता अघि)
काठमाडौं – देशभर चिसो बढेको छ । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली सक्रिय भएसँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ ।
चिसोमा संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । चिसोबाट कसरी जोगिने ? बालबालिका र वृद्धवृद्धाको हेरचाह कसरी गर्ने ? यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका छातीरोग विशेषज्ञ डा. नीरज बमका टिप्स यस्ता छन् :
ओमिक्रोन: डेल्टाको तुलनामा धेरै ट्रान्समिसिबल तर कम गम्भीर